BY ANASTASIA STEFANUK JUNE 3, 2019 AUGMENTED REALITY, GUEST POSTS
All-na-otu capacitive aka Kiosk usoro
Flo usoro aka aka IR-guzoro
Nleba anya na ihe ngosi ọkwa nleba anya nke usoro
Vidiyo vidiyo dijitalụ obere usoro
Onye na-eme mgbasa ozi n'èzí
Onye na-ahụ maka mgbasa ozi na mgbidi
Ihe eji eme otu ihe ana - emetuta otu onodu
Ihe a na-emetụ n'ahụ IR usoro
INI IGBO OWO
Ulo oru gburugburu ụwa ugbu a na-ejikọ teknụzụ iji welie ngwaahịa na ọrụ ma na-agbaso oge. Uzo ohuru ohuru a na-ele anya n’aho 2020 na-agbadata n’igunye itinye uzo eziokwu gbakwunyere dika Augmented Reality (AR) na Virtual Reality (VR) n’ime otutu ulo oru, tumadi na Retail. Inwe ihe omuma banyere otu esi amu ngwa ahia di otu a yana ndi ezigbo ulo oru ndi n’eme ha bu ihe bara uru.
Kedu ihe kpatara eji VR na azụmahịa?
Enwere ọtụtụ uru maka azụmaahịa mgbe ị na-eji teknụzụ VR. N’afọ 2018, ọnụ ahịa ahịa AR / VR dị ihe dị ka ijeri $ 12, ma na-ebu amụma na ọ ga-agbago karịa $ 192 ijeri na 2022.
1. Ahụmịhe Ndị Ahịa Ahịa
VR na AR na-enye ohere maka imirikiti ma nwekwuo ahụmịhe ahịa. Uche ndị ahịa na-etinye onwe ha na ike itinye onwe ha ma lekwasị anya na ahụmịhe kwalitere n'enweghị ndọpụ uche. Nke a na - eme ka ndị na - azụ ahịa mata ngwaahịa dị na gburugburu mpaghara.
2. Atụmatụ Azụmaahịa Azụmaahịa na Mmekorita
Teknụzụ VR na-enye ohere ka ndị azụmaahịa nwee nnukwu mgbanwe na iji 'nwalee tupu ịzụta' echiche. Site na VR, ịzụ ahịa ngwaahịa na-adabere n'ịmepụta ahụmịhe aka nke ngwaahịa ahụ. VR nwere ike ibufe ndị mmadụ ebe ọ bụla, nke ezigbo ma ọ bụ n'echiche. Teknụzụ a na - agbanwe ahịa site na ịkọ akụkọ banyere ngwaahịa na igosi na ikwe ka ndị na - azụ ahịa na ndị investors tinye ngwaahịa ahụ n'onwe ha.
3. Nzụmaahịa Di elu na Ndị Ahịa Ntanetị
VR na-enye ndị na-azụ ahịa ịtụle ahịa, arụmọrụ na ogo nke ngwaahịa ahụ. Ulo oru di iche iche na enwe ike ichikota ihe omuma karie otu esi enweta ndi ahia. Ndị ahịa ahịa na-enyochakwu data siri ike nke enwere ike iji iji meziwanye ogo ngwaahịa yana ịbawanye ntụkwasị obi ndị ahịa.
Eziokwu Virtual na-enye ọtụtụ ohere maka itinye n'ọrụ n'ofe ọrụ dị iche iche. Ndị ahịa Markates na-enwe ike iru atụmanya na mmasị site n'inye ndị ahịa na ndị nwere ego ohere ịnweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ enyere, dị ka imegharị njem na oghere. Ojiji VR dị ka akụkụ nke ngwaahịa na ọrụ nke ụlọ ọrụ a na-enye na-eme ka ma ụlọ ọrụ dị iche iche pụta na ahụmịhe nke ndị ahịa nwere na ngwaahịa ha.
Marriot Hotels na-eji VR mee ka ndị ọbịa ha hụ alaka ha dị iche iche gburugburu ụwa. Ọ bụ ezie na ntụkwasị obi anụ ọhịa nke South na West Wales na-enye VR setịpụrụ na vidiyo 3D iji chebe ndị ọbịa ha na ahụmịhe nke ịga na saịtị ha na ịnụ ụtọ anụ ọhịa. VR na njem nleta gosikwara na ha nwere uru maka ụlọ ọrụ ndị etinye aka. Nkwado n'etiti Thomas Cooke na Samsung Gear VR nwere ROI pasent 40 n'ime ọnwa atọ mbụ mmalite ya.
Companieslọ ọrụ ndị na - emeziwanye ụlọ dịka IKEA, John Lewis, na Mmezi Ulọ Lowe ejiriwo VR mee ihe. Nkà na ụzụ na-enyere ndị ahịa ha aka iji anya nke uche ha hụ atụmatụ ndozi ụlọ na 3D. Ọbụghị naanị na nke a na-ewusi ọhụụ ha maka ụlọ ha ike, kamakwa ha nwere ike imeziwanye atụmatụ ha ma jiri ohere dị mma nke ụlọ ọrụ nyere ha egwu.
Lọ ahịa TOMS na-eji VR eme ka ndị ahịa jiri akpụkpọ ụkwụ ha mee njem ma soro otú ihe ha nwetara si azụta na-aga onyinye onyinye na Central America. Companieslọ ọrụ ụgbọ ala dịka Volvo na-enye ndị ahịa ha ohere ịnwale mbanye otu n'ime ụdị ọhụụ ha site na ngwa VR ha. McDonald ji igbe nri ha nwere obi ụtọ wee gbanwee ya ka ọ bụrụ VR setịpụrụ Goggles Obi thattọ nke ndị na-azụ ahịa nwere ike iji gwuo egwuregwu ma soro.
Companieslọ ọrụ maka ụlọ, dị ka Giraffe360 na Matterport, na-enye ndị ahịa ha ihe nlegharị anya nke ihe onwunwe. Ejirila VR bulie ngwongwo elu, ọ meekwala ka onye nnochite anya na ntinye ndị ahịa na mmasị. Atụmatụ azụmaahịa na usoro ịba uru abụrụla ahụmịhe na ọmụmụ ihe maka ndị ahịa na ndị nnọchite nwere atụmatụ VR na teknụzụ.
Bawanye n'eziokwu bụ ọdịnihu
Site n’ịba n’ihu na mmepe VR na teknụzụ na VR, a na-ekwu na otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ndị na-azụ ahịa ụwa niile ga-eji VR na 2020. Na ọtụtụ ndị mmadụ na-enweta ma na-eji teknụzụ dị otú ahụ, azụmahịa ga-agbaso site na ịnye ngwaahịa ndị kwekọrọ VR. na ọrụ. Ness nweta ụdịrị teknụzụ dị otú ahụ ka ọ dịrị maka ndị achụmnta ego na-eme ka ngwaahịa, ọrụ, atụmatụ ịzụ ahịa, na iguzosi ike n'ihe nye ndị ahịa.
Oge nzipu ozi: Mee-13-2020
akara ukwu anyi, ndi isi, ihe ohuru, ahia
BY ANASTASIA STEFANUK JUNE 3, 2019 AUGMEN…
EGO NA-EGO NA-EKWURUTTA N'ALAEZE DIGITAL S ...
IHU OGWU ANA IJI DIGITAL S ...
OLEE OT CAN CH GA - EGO AH DEVR DEV AH DEVR-NSỌ?
Adreesị: Owuwu C, Gaoke International Innovation Industry Park, Guangming District, Shenzhen, China
© nwebisiinka - 2010-2020: Echekwabara ikike niile. Ngwaahịa dị ọkụ, Ebe nrụọrụ